जापानीको नेपाल चासो – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:55:24
जापानी समय : 07:10:24
जापानीको नेपाल चासो
17 July, 2017 00:19 | जापान , बिचार | comments | 118650 Views
-ईश्वर प्रसाद बस्याल (विवेक)
ओहायो गोजार्इमास (नमस्ते) भन्दै काममा छिरेँ। सधैंको दिन जस्तै त्यो दिन पनि सँगै काम गर्ने जापानी साथीसँग भेटेर कुरा सुरु गरेँ
म: ओहायो (नमस्ते) आरामै हुनुहुन्छ?
साथी: ओहायो नभनी नमस्ते: मात्र भन्दै आरामै छु नि। अनि हजुर?
म : म पनि आरामै छु।
यसपछि कामको ब्रेकमा संयोगले खाजा खाने बेला एउटै टेबलमा बसियो र गफ पुन: सुरु भयो।
साथी हजुर कुन देशबाट भन्नुभो रे?
म: म नेपालबाट।
साथी: नेपाल सुन्दर छ भन्छन् तर गएको छैन। अनि कता बस्नुहुन्छ? जापान कहिले आउनुभो?
म: (आफ्नो विवरण बताएर म उसको बारेमा पनि सोध्दै थिएँ) कहाँ बस्नुहुन्छ: अनि परिवारमा को-को हुनुहुन्छ?
साथी: म इचिखावा बस्छु। परिवारमा म, आमा र बुवा छौं।
म: जापानीलाई उमेर नसोध्नु भन्छन् तर पनि मलाई सोध्न मन लाग्यो। उमेर कति भयो हजुरको?
साथी: ४२ वर्ष
म: विवाह गर्नु भएनर?
म: किन नि?
साथी: २२ वर्षको उमेरबाट काम सुरु गरियो बिहेको बारेमा सोच्ने समय नै भएन।
जापानीहरु एकपटक काम सुरु गरेपछि हतपत्त छोड्दैनन् चाहे त्यो काम जति नै गाह्रो किन नहोस्। यस्तो देखेको मैले काममा व्यस्त भएर बिहे गर्ने फुर्सद भएन भन्दा नपत्याउने कुरै भएन। जापानमा कामले फुर्सद नपाएर बिहे नगरी बस्नेहरु प्रशस्तै छन्। बिहे गरेर विचार नमिल्नेहरुसँग सम्झौता गर्नुभन्दा बरु बिहे नै नगरी बस्न उचित ठान्छन् यिनीहरु।
एकपटक सोचौं त जापान आज जापान कसरी भयोरु दोस्रो विश्वयुद्धले क्षत-विक्षत भएको जापान त्यति छोटो समयमै प्रगतिको चरम शिखरमा पुग्नु कुनै सामान्य कुरा होइन। जापान आज धेरैको सपनाको गन्तव्य बनेको छ। सुरक्षाको दृष्‍टिले समेत जापान विश्वको अग्रपङ्तिमै छ। भोक, निद्रा, थकाइ यहाँका जनतालाई पनि लाग्दो हो तर यिनीहरु आफ्नो देशलाई बनाउने संकल्पमा यसरी तन्मयताका साथ लागे कि यिनीहरुले आफ्ना संवेगहरुको अनुभूति नै गर्न सकेनन्। जापानीहरुको राष्ट्रियता देखेर मेरो शिर नतमस्तक हुन्छ। व्यक्तिगत आवश्यकतालाई पूरै बेवास्ता गरेर यिनीहरुले आफ्नो देशलाई आजको स्थितिमा पुर्याएका हुन्। देशप्रेमको योभन्दा उच्च नमूना संसारमा शायदै कहिं होला।
कुरा कै प्रसङ्गमा उनले नेपालको महाभूकम्पको पीडा ताजा गराउँदै सोधे:
साथी: केहि समय पहिला नेपालमा भूकम्प गएको थियो रे। कस्तो छ अहिले नेपालको अवस्था?
म: हो भूकम्पले नेपालमा ठुलो क्षति गर्‍यो। अहिले सुधारोन्मुख छ। विपतको त्यो समयमा जापानीले नेपालप्रति गरेको सहयोग नेपालीले भुल्ने छैनौं। म पुन: आभार प्रकट गर्छु हजुरहरुको त्यो अमूल्य साथ र सहयोगको लागि।
साथी: त्यो त हाम्रो मानवीय कर्तव्य हो। (उसलाई नेपालको इतिहासबारे पनि केही जानकारी रहेछ) मैले नेपालको विषयमा एउटा कुरा सुनेको थिएँ के त्यो सत्य हो?
म: कस्तो कुरा?
साथी: धेरै वर्ष पहिले हजुरहरुको देशमा सम्पूर्ण राजपरिवारको हत्या भएको थियो रे?
म: सत्य हो। त्यो नेपालको निम्ति ठुलो दुर्भाग्य थियो। अहिले त नेपालमा गणतन्त्र आइसक्यो र पनि जनप्रेमी ती राजा वीरेन्द्रलाई कसैले भूल्न सकेको छैन। नेपालको इतिहास पनि जान्नुभएको रहेछ। नेपालको विषयमा अरु के-के कुरा जान्नुभएको छ?
साथी: मलाई विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा र बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो भन्ने थाहा छ। एकपटक जाने रहर छ। आफ्नो जीवनभरिमा एकपटक नेपाल अवश्य जानेछु।
म: हजुरलाई स्वागत छ नेपालीको तर्फबाट। नेपालले भौतिक उन्नति गर्न नसके पनि प्रकृतिक सौन्दर्य र सम्पदाले भरिपूर्ण छ। मलाई विश्वास छ अवश्य मन पर्नेछ हजुरलाई नेपाल।
यति कुरा सकिसक्दा खाजा खाएर काममा फर्किने समय भैसकेको थियो। हामी आ-आफ्ना काममा लाग्यौं।
-हाल: टोकियो, जापान